WASHINGTON — Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vadaidzira musangano wechimbi chimbi neChina wekuita nenhengo dzeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, pamwe nemakurukota anoti rezvemari, VaTendai Biti, pamwe negurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, kuti vazeye nyaya yekuti ZEC yowana sei mari yekuti itange basa rayo.
Chirongwa ichi change chichifanira kutanga musi wa 3 Ndira chichipera muna Kubvumbi. Asi nenyaya yekuti ZEC haina kuwana mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nerimwe emadhora, chirongwa ichi hachisati chatanga izvo zvapa kuti VaTsvangirai varonge musangano weChina.
VaBiti vanoti vachapa ZEC miriyoni imwe chete yemadhora svondo rino kuitira kuti itange basa rayo regadziriro yereferendamu. Ukuwo VaChinamasa vanoti VaTsvangirai vange vavimbisa kuti vachabatsira kuti ZEC iwane mari asi vakakundikana.